ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने? वामिमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने? वामिमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने? वामिमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ बैशाख ७, शनिबार २३:१२ मा प्रकाशित
गुल्मी, बैशाख ७ । वामीमा शुक्रवार अग्नी नियन्त्रण तथा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बिषयक सचेतनामुल तालिम सम्पन्न गरीएको छ ।
अग्नी सेफ नेपालको आयोजनामा वामी बजार निवासी स्थानीय बासिन्दाहरुलाइ तालिम प्रदान गरीएको हो । तालिमको अवसरमा सो कम्पनीका प्रमखु महेश पन्तले ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतनाको बारेमा जानकारी गराए । उनले एक केजी ग्यास बलेको खण्डमा २५ हजार लिटर पेट्रोल बाले सरहको आगो बल्ने, ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर बन्द नगरेको खण्डमा जतिबेला पनि खतरा हुन सक्ने लगायतका बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।
काठमाण्डौको धापासीमा रहेको सो कम्पनी मार्फत पन्तले देशभर नै यस्ता कार्यक्रमहरु निशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । केही दिनदेखी गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका बिभिन्न क्षेत्रमा यस्ता खालका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दे आइरहे वामी बजार निवासी कार्यक्रमको संयोजन गरीरहेकी सुष्मा तिवारीले जानकारी दिइन् ।
सामान्य गल्तीको कारण पनि जनधनको क्षती गराउन सक्ने भएको कारणले ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरीन् ।